Raharaham-pitiavana/fankahalan’ny Maraokana an’i Obama · Global Voices teny Malagasy
Raharaham-pitiavana/fankahalan'ny Maraokana an'i Obama
Voadika ny 11 Jona 2009 4:18 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Nederlands, 简体中文, 繁體中文, Español, English
Ny kabary nataon’ny filohan’ny Etazonia Barack Obama tany Kaira ho an’ny tontolo Silamo dia niteraka fihetsika niredareda tany an-toerana sy tany ivelany koa; tsy ny kely indrindra tamin’ireo mpitoraka blaogy avy any Mahgreb izay nandrakofan’ireo lahatsoratra mafana tanaty blaogy sy tweets mivantana hevitra manalokaloka mankany amin’ny fanohanana feno sy tsy misy fepetra, ny fanahiana lalina ary ny fankahalàna sy tsy fahatokisana mihitsy aza.
Na talohan’ny fanandratana an’i Obama aza, ary efa talohan’ny nanapahany hoe firenena iza amin’ny ‘Moyen-Orient’ na Afrika Avaratra no handray ny kabariny momba ny pôlitika ivelany, ireo Marokana-Amerikana maromaro dia efa niezaka nanao tsindry bokotra mba handalovan’ny filoha Obama any Rabat. Ny sasany indray nifidy an’i Casablanca. Nisy vohikala mihitsy aza, President Obama to Speak in Morocco, nosokafana ho amin’izany:
[Izahay dia manasa] ny filoha Obama hifidy an’i Maraoka mba handray ny kabary pôlitika momba ny ivelany.
I Maraoka no firenena idealy mba handefasana hafatra fiadanana ho an’ny tontolo silamo.
Firenena tia fiadanana henoin-teny aty amin'ny faritra, i Maraoka dia efa naman’i Etazonia hatry ny ela ary ho tretrika hampiantrano ny filoha Barack Obama amin’ity fotoana manan-tantara ity.
Farany, ary tamim-pahadisoam-panantenana lehiben’ireo ho an'ireo Maraokana mpankafy an’i Obama, tsy hikabary any Maraoka ny Filoha Amerikana fa aleony – lojika be, hoy ny sasany hiteny – Kaira, any Egipta.
Ny blogoma (anarana hafa iantsoana ny tontolon’ny fitoraham-blaogy Maraokana) sy ireo Maraokana maro mampiasa Twitter dia nandray tamin’ny fomba hafa ny kabary tany Kaira. Ireto misy santionany amin’izany fihetsika izany.
Nandrasana efa ela
Efa novinavinaina ihany ny kabarin’i Obama tany Kaira. “Ahoana raha mifankahita amin’ny Obama aho?” hoy i Mohamed Malouk manontany tena. Raha mitoraka blaogy ao amin’ny Elmafjoue [Ar] izy, dia miteny:
لو التقيت أوباما فسأطلب منه أن يقتطع من وقته الثمين جزءا يخصصه لحكامنا الميامين ليمحو عنهم أميتهم في فن التعامل مع الشعوب ، وليلقنهم بعضا من أبجديات اليموقراطية الواضحة ، وليعلمهم كيفية التخلص من عقدة التخوف من المواطنين .
Raha mifankahita amin’i Obama aho, dia hiangavy azy mba hanokana kely amin’ny fotoan-tsarobidiny ho an’ireo mpitondra anay, amin’izay mba hoafahany amin’ny tsy fahalalàny izy ireo rehefa mikarakara ny vahoakany sy hampianatra azy ireo ny fototry ny demokrasia ary hialàn-dry zareo amin’ny fahatahoran-dry zareo ny vahoakany.
Manohy i Mohamed [Ar]:
لو التقيت أوباما لقلت له إن سلفكم ما ترك فينا إلا حقدا متصاعدا لأمريكا ، وما أنتج لنا إلا غضبا عليها ، وما صنع بيننا إلا كرها لها ، وانت جئت من كل فج عميق بأمل وأطلقت لكل فئة وعدا ، والعرب والمسلمون قوم تتحول عندهم بين لحظة وأخرى الآمال إلى آلام
Raha mifankahita amin’i Obama aho dia hoteneniko azy fa ny teo alohany dia nahatonga fankahalàna ho an’i Amerika teo aminay ary tsy nanao afa-tsy ny niteraka hatezerana ho azy izany; fankahalàna kolokoloinay ao anatinay; avy eo, tonga ianao [Filoha] miaraka amina fanantenana be ary nanao fanamby tamin’ny vondrom-piarahamonina rehetra, na dia matetika aza ireo Arabo sy ireo Silamo no mahita ny fanantenany miova ho fahadisoam-panantenana.
Toto-afon'ny mpampita vaovao
Iray tamin’ireo fanavaozana nentin’ny fitondràna Obama ny fahafahan’ny vahoaka nanaraka ny kabary tany Kaira tamin’ny alàlan’ny tatitra nalefa an-kafatra amin’ny finday. Resaka nafana dia nafana tao amin’ny Twitter ilay kabary ary marobe ireo fanehoan-kevitra nipoitra nivantana.
Nanaraka ilay hetsika i Larbi_org [Fr] ary nandefa tweet izy:
Kabary niezinezina sy nanan-danja nataon'i Obama tany Kaira.
Taoriana kely, tao anatina ‘tweet’ fanindroany, nanontany tena i Larbi hoe “Inona no tian’i Obama tenenina amin’ilay hoe ‘Tontolo silamo’ ?”.
Maro ihany koa ireo fihetsika nampihomehy rehefa nalefan'i @annouss tamin'ny alàlan'ny tweet ny nolazain'i @mbaa…
Ho an’ireo olona rehetra ao amin’ny Anjerimanontolon’i Kaira, tsy Hosni Moubarak i Obama, tsy voatery mitehaka isaky ny fehezanteny iray ianareo.
Nampitaha ny kabary tany Kaira tamin’ny kabarin’i JFK «Ich bin ein Berliner» i Citoyen Hmida. Nanambara [Fr] izy fa:
Le discours prononcé à l’Université du Caire a été ponctué par de nombreux applaudissements. En effet, le fait d’entendre un président américain dire « Assalamou 3alienkoum » peut redonner espoir. Cette formule rappelle le fameux « Ich ben ein Berliner » clamé par J.F.K. lors de sa visite à Berlin-Ouest en juin 1963.
Obama a eu également l’élégance intellectuelle de citer, fort à propos, certains versets du Coran.
Ny kabary natao tao amin’ny Anjerimanontolon’i Kaira dia narahàna tehaka maro . Ny fahenoana Filoha Amerikana miteny hoe «Assalamou Alaykoum» dia manome indray fanantenana vao. Mampatsiahy ilay teny malaza « Ich ben ein Berliner » notenenin’i J.F.K fony izy nitsidika an’i Berlin tamin’ny Jona 1963 izany.
Nànana fahalalahan-tsain'ny avara-pianarana nitanisa andininy sasantsasany ao amin’ny Kôrany koa i Obama.
Nanampy ihany i Citoyen Hmida:
(…)ce discours tant attendu n’est en partie qu’un tissu de lieux communs sur la civilisation arabo-musulmane et sur les positions américaines contre « l’extrémisme violent ».
Ity kabary nandrasana efa ela ity dia, amin'ny ampahany, fitambarana teniteny foana momba ny fandrosoana Arabo-Silamo ary momba ny fandraisan-toeran'ny Amerikana manoloana ny extremisme mahery fihetsika.”
Nitovitovy tamin’izany koa ny fihetsik’i Abdoukili. Nanoratra izy:
Ireo teny nampiasain’i Obama, tahaka ny fitanisana andinin’ny tamin'ny Kôrany (izay nampiasainy in-efatra) ary ireo oha-pitenenana silamo toa ny “assalaamu alaykum” , “azaan ” ary “Mohammed (ho amin’izy ireo anie ny fiadanana) ” dia tetika tsara ho amin'ny fifandraisana amin’ny vahoaka mba hisarihana bebe kokoa ny sain’ny mpihaino Silamo.
Samia miandry dia hiara-mahita
Ireo mpitoraka blaogy hafa,na dia nankasitraka ny kabarin’i Obama aza dia naka ilay fomba ‘Samia miandry dia hiara-mahita’. Laila Lalami, mpanoratra Maraokana monina any Etazonia dia nanoratra:
Fitsapana lehibe iray ho an’ity fifanantonana vaovao ity, amiko, ireo fanjanàhana. Efa niteny tamin’i Netanyahu i Obama fa ny fanatsaharana tanteraka ny fanjanahan’ny Israeliana no tadiaviny ary tsy hanaiky ny fisian'ny tranga miavaka toy ny “fiitàrana voajanahary” izy. Raha mahavita izany izy, dia ho raketina toy ny fiolahana lehibe iny kabary iny; raha tsy izany, dia hanaraka ny làlana nizoran’ny kabary nataon’ireo fitondràna dimy teo aloha iny: n’aiza n’aiza.
Tsy ny olon-drehetra anefa no gaga tamin’ireo tenin’i Obama. Abdelhak al'Koush, mpitoraka blaogy ao amin'ny Afinina [Ar], dia nandefa fanakianana mivaivay ho an’ny filoha Amerikana ary nanontany momba ireo hery manosika azy taminà lahatsoratra tsy misy fahalalam-pomba. Nanoratra izy:
توفق الرئيس في شد أنفاس القطيع العربي بمن فيهم البلهى من المثقفين العرب، ثم لوح بيديه الكريمتين كما يفعل ملوكنا وجبابرتنا الطغاة في لحظات نفاقهم المتميزة ،ـ وصفق له الحاضرون بحرارة ، ولينتهي الفصل الأول من المسرحية
… جاء أوباما إذن ليقبل العالم العربي الميت ” قبلة الموت”
الحقيقة المرة هو أن أوباما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية فرصة أن تلتقط أنفاسها بعد حروب متتالية، اٍذ لم يتردد بوش في [تعبير جارح] العربي البارد ثقافيا وسياسيا ودينيا وحضاريا ، والحقيقة الأمر هو أن العدوان الأمريكي سيشتد بعد مرحلة أوباما .
Tonga mba hanolotra oroka i Obama… “oroky ny fahafatesana” ho an’ilay Tontolo Arabo izay efa maty[…] Mangidy ny tena zava-misy marina, manolotra fotoana iray hakàna aina ho an’i Etazonia i Obama taorian’ny ady tsy an-kiato nifanaovana tamin’ireo Arabo izay mangatsiaka ara-kolotsaina, ara-politika ary ara-pinoana. Taorian’i Obama, hirongatra ny herisetra Amerikana.
Nahasarika ny fieritreretan’ny andian'ondry Arabo (sic) ny filoha Amerikana, anisan’izany ireny Arabo avara-pianarana vendrana (sic) ireny, ary nanofahofa ny tànany izy maka tahaka ireo mpanjakantsika sy ‘despotes’-ntsika tamin’ny fomba fisainan’izy ireo mihatsara velatsihy, dia mitehaka am-pifaliana ireo mpihaino mamarana ny fizarana voalohan’ny fampihomehezana
Maro ny zavatra notenenina momba ilay kabarin’i Obama tany Kaira. Anisan’izy ireo i Abdoukil izay naneho sori-panantenana farany teo am-pamaranana ny lahatsorany tamin’ny fitenenana fa
Amin’ny ankapobeny, nifidy tamim-pitandremana ny teniny i Obama ary niteny izay tian’ny ankamaroan’ny Silamo henoina avy aminy. Tsy misy afa-tsy ny miandry ny fomba hahatanteraka ny nofin’i Obama mba hisy fifandraisana tonga lafatra amin’ny tontolo Silamo sisa, tontolo izay tokony mbola hiasana be mba hanafoanana ny sarisary ratsy ananan'ireo Silamo maro momba an'i Etazonia.
Nosoratana niaraka tamin’i Hisham ity lahatsoratra ity.